तीजको निहुँ पारेर कार्यालयमा तालै ठोकिदिए कर्मचारीले
इलाम, २८ भदौ : इलाम सदरमुकामको आयुर्बेद औषधालय बुधबार दिनभर बन्द रह्यो । सार्वजनिक विदा नभए पनि बुधबार त्यहाँका कर्मचारीले कार्यालयको मुल ढोकामै ताला ठोकेर हिँडिदिए ।
हाल इलाम नगरपालिकाको मातहतमा रहेको सो आयुर्बेद औषधालयमा तीन जना कर्मचारी छन् । ती मध्ये दुई जना कर्मचारी महिला र एकजना पुरुष छन् । बुधबार हरितालिका तीज भएका कारण महिला कर्मचारीलाई बिदा थियो । तर पुरुष कर्मचारी पनि भएको सो औषधालयको ताला कार्यालय समयभर खुल्दै खुलेन ।
महिला कर्मचारी तीजको बिदा सदुपयोग गर्न अर्थात् तीज मनाउन गए पनि पुरुष कर्मचारी कता गए होलान् र कार्यालय नै ताला लगाउनु परेको होला ? यो विषयमा इलाम नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार शाहलाई सोध्दा उनले थाहा नभएको जवाफ दिए । उनले भने, ‘हिजो (मंगलबार)त त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, आज कता जानुभयो थाहा भएन ।’
ती पुरुष कर्मचारी औषधालयका वरिष्ट वैद्य मनोजकुमार यादव हुन् । तीजमा महिला कर्मचारीको बिदा पर्दा उनले कार्यालयमा बसेर सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्ने हो । दुई जना कर्मचारीले बिदा पाउँदैमा कार्यालयमा ताला ठोक्नुपर्छ भन्ने कहिँ कतै नियम कानुन छैन । सार्वजनिक बिदा बाहेकका दिनमा बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म अनिवार्य सरकारी कार्यालय खोल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदाहुँदै पनि औषधालय बुधबार बन्द हुनुले नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ ।
यस विषयमा औषधालयकै प्रमुख रहेकी कविराज मञ्जु सुबेदीसँग जिज्ञासा राख्दा कार्यालयकै कामले यादव बाहिर गएको हुँदा औषधालयमा ताला लगाउनुपरेको जवाफ दिइन् । उनले औषधालयमा पर्याप्त कर्मचारी नभएको, पुरुष कर्मचारी थोरै भएको, अनि सेवाग्राही पनि नगन्य मात्रै आउने गरेको कारणले ताला ठोकेर बाहिरको काममा कर्मचारी जानुपरेको स्पष्टोक्ति दिइन् ।
उनकै भनाई अनुसार वैद्य यादव बुधबार नेपालटारमा सञ्चालन हुने गाउँघर क्लिनिकमा गएका थिए । १५ दिनमा एकपटक हुने गाउँघर क्लिनिक औषधालयबाट महिनामा दुईपटक गोदक र नेपालटारमा बुधबारकै दिन सञ्चालन हुने भएकाले त्यहाँ जानुपरेको उनको तर्क थियो । उनले कार्यालयको काम भन्दा क्लिनिक नै महत्वपूर्ण भएकाले पनि कार्यालय बन्द गरेर जानुपरेको पनि बताइन् । उनले दोहो¥याइन्, ‘कार्यालयमा खासै सेवाग्राही आउँदैनन् । क्लिनिकमा नसर्ने रोग ब्यवस्थापनको काम, रोगीलाई सुगर, प्रेसर, दम जस्ता नसर्ने रोगहरुको औषधी वितरण गर्ने जस्ता काम गरिने भएकाले जानु परेको हो ।’
तीजको दिन पनि क्लिनिक प्रभावकारी होला ? भन्ने सन्दकपुर दैनिकको प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘नियमित हामीले वितरण गरेको औषधी प्रयोग गर्ने बिरामी आउँछन्, सार्वजनिक विदाबाहेक अरु दिन बुधबार जहिल्यै क्लिनिक सञ्चालन हुन्छ ।’
तर क्लिनिक सञ्चालन गर्ने एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रम भएपनि कार्यालयमा तालै ठोक्नु चाहिँ नगरपालिका र औषधालयले त्यहाँ आउने सेवाग्राहीप्रति बेवास्ता गरेको ठहरिन्छ । तीज नै भएपनि कार्यालय खोल्ने वातावरण बनाउनु स्थानीय वार्डस्तरीय स्वास्थ्य समिति र नगर कार्यपालिकाको कर्तब्य हुन आउँछ । औषधालयजस्ता स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा दिने कार्यालय नै विभिन्न बहानामा बन्द गर्न थाल्ने हो भने नगरबासीले उपचार सेवा लिने ठाउँ कहाँ होला ?
यो औषधालय नगरपालिकामार्पmत सञ्चालन हुन थालेको लामो समय भइसक्दा पनि कार्यालयअगाडि टाँगिएको साइनबोर्डले भने अभैm यो औषधालय आइतबारेको मेची अञ्चल आयुर्बेद औषधालयकै नियन्त्रणमा रहेको झल्काउँछ । तर मेची अञ्चल आयुर्बेद औषधालयले भने इलामको औषधालय नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकिएकाले त्यहाँका कर्मचारी कहाँ के गर्दैछन् भन्ने थाहा नहुने जानकारी दिएको छ । नगरपालिकामा हस्तान्तरण भइसकेको कार्यालयको बोर्ड फेर्ने त अहिलेसम्म कसैले चासो देखाएको छैन भने यो कार्यालयबाट सेवाग्राहीले सेवा लिने कुरामा कत्तिको भर पर्ने ?